I-Wooden Garden Cottage
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Dirk
Yindlu yokhuni ehlanzekile, nokho ethule encane ezenzela ukudla endaweni eyaziwa kakhulu e-St Micheals.
Ukucula kwezinyoni usuku lonke kanye nokuzola, kuhambisana kahle futhi kusiza ngokujaha kwansuku zonke kanye nengcindezi.
Lapha ungaba nje ekuthuleni. Le ndlu yamapulangwe inegumbi lepulani elivulekile elinekhishi elincane eline-tv, umbhede olingana nendlovukazi.
Ine-bathroom yayo eneshawa, indlu yangasese kanye ne-basin. Ilungele umbhangqwana noma umuntu oyedwa.
I-Wifi ikithi 😁
Le ndlu encane engadini yokhuni yokuziphekela itholakala e-St Michael's/Uvongo.
Imaphakathi kakhulu futhi iseduze nenxanxathela yezitolo nezindawo zokudlela, futhi ibanga elifushane ukusuka olwandle futhi iseduze neC Bali kanye nolwandle lwaseSt Michael kanye nolwandle lwase-Uvongo.
Sinenhlanhla yokuba nezitolo ezimbili ezingaphansi kwemizuzu eyi-10 ukusuka lapho.
Le yunithi ihlanganisa ikamelo lokulala eligcwele elinombhede osayizi wendlovukazi kanye ne-En-suite yokugezela eneshawa, indlu yangasese kanye nokugeza phakathi bese kuba nekhishi elincane lapho ungazilungisela khona ukudla kwakho njengoba kuyindawo yokuziphekela.
Kukhona ne-TV ene-DSTV, Netflix ne-Showmax kanye ne-wifi, ngalezo zinsuku zemvula.
Kukhona nendawo yokuphumula phambi kwendlu lapho ungahlala khona uphumule.Ukuthula kuyazikhulumela.
Kuzwakala sengathi usondelene kakhulu nemvelo nakuba usedolobheni, njengomuzwa wasepulazini. Kuyamangalisa.
Yebo ngizoba sendaweni usuku lonke, uma kukhona imibuzo noma usizo oludingekayo.
UDirk Ungumbungazi ovelele